China Ibe 800w Spotlight 130lm W China Manufacturers & Suppliers & Factory
Ibe 800w Spotlight 130lm W - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Ibe 800w Spotlight 130lm W)
Ikike 800w bọọlụ ikanye 130lm / w
Nsonaazụ ọkụ a dị elu 800w bọlụ bọl bọlb 130lm / w nwere ngụgụ nke 65,000lumens. Ihe ọkụ bọọlụ LED 800w 130lm / w dị mma maka ịmịcha nnukwu ama egwuregwu, ebe a na-egwu egwuregwu na ụlọ egwuregwu dịka ụlọ ikpe bọọlụ basketball, ụlọ tennis na ebe egwuregwu bọọlụ. Nnukwu nnukwu 800W Outdoor LED LED 800 800 Lights 130lm...
Ikike 500w bọọlụ ikanye 130lm / w
Nmepụta ọkụ a dị elu 500w bọl bọlụ bọl bọlb 130lm / w nwere 65,000lumens. Iche Ihu Egwuregwu Kọmputa LED 500w 130lm / w dị mma maka ịmịcha nnukwu ama egwuregwu, ebe a na-egwu egwuregwu na ụlọ egwuregwu dịka ụlọ ikpe bọọlụ basketball, ụlọ tennis na ebe egwuregwu bọọlụ. Nnukwu ọkụ ọkụ Ngwunye Ngwakọta Highlọ Egwuregwu...
Enyocha Ebe Ahịa 800w 130lm / w
Esemokwu a dị elu nke Led 800w 130lm / w nwere ọnụọgụ 65,000lumens. Chakwasa ihie 800w 130lm / w LED dị mma maka ịmịcha nnukwu ama egwuregwu, ebe a na-egwu egwuregwu na ụlọ egwuregwu dịka ụlọ ikpe bọọlụ basketball, ụlọ tennis na ebe egwuregwu bọọlụ. Nnukwu ntụpọ ihu igwe a 800 800 130mm / w bụ IP65 ma chebe ya ka...
800W duziri bọl bọl bọl bọl
800W duziri bọl bọl bọl bọl Bbier na - ewebata LightW Light Bọọlụ Bọọlụ 800W maka nnukwu ụlọ egwuregwu na n'èzí, ma ọ bụ oghere ọ bụla ọzọ chọrọ ezigbo ọkụ. Igwe a na-eji ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ eme ihe na-enye ọkụ elele na oge ọkụ ọkụ efu. IP66 - A na - ekpochi ikpo ọkụ na mmetụta a na - eguzogide...
Mkpụrụ ọkụ ọkụ ọkụ dị elu 800W 104000lm
Nke a 800W High Mast Light Pole Installation a gụrụ 104,000lumens. Echiche Ụdị Mpịcha Elu nke Mast dị mma maka ịmalite nnukwu ámá egwuregwu, ebe egwuregwu na egwuregwu dịka ụlọikpe basketball, ụlọ tennis na ogige bọl. Nke a nnukwu High poolu Light osisi Design IP65 na-echebe megide mmiri. Ihe a na-ejikọta ọnụ nke iju...
Ibe 800w Spotlight 130lm W Ibe 800w Spotlight 130lm / w Ibe 600w Spotlight 130lm / w Ighalo bọọlụ 500w Light 130lm / w Ngwurugwu LED 300w Light 130lm / w Led 640W Sport Light Ọpụpụ Light 80000 Spotlight 15 ogo Led Street Light 150 Watt